Fandaharanasa ho an'ny Tanora (Aprily 2017)
Andron’ny Clubs, Lycée Nanisana
Toy ny fanao isan-taona dia mankalaza ny andron’ny Club ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana. Ny Talata 07 Febroary no nanatanterahin’ny Club Feon’ny Filazantsara izany izay naompana tamin’ny fampirantiana ireo sary marobe mampahafantatra ireo fandaharan’asa notanterahin’izy ireo nandritra ny taona maro. Nasaina ireo mpianatra mba hitsidika ny efin-trano fampirantiana. Taorian’izany dia nisy ny kilalaon-tsaina izay nalaina tao amin’ny Baiboly nifaninanan’ireo mpikambana.
Fandaharanasa ho an’ny Tanora (Desambra 2016)
Sekoly ambony ISPPS: Famoahana ireo mpianatra andiany faharoa
Tsy mionona amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana ihany ny asa fitoriana ny Filazantsara ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) fa dia mahenika ny Ivontoerana maro. Anisan’ireny ny Sekoly Ambony Institut Supérieur des Paramédicaux et Promotion de la Santé (ISPPS) izay manana Sekoly amin’ny Faritra roa (Antananarivo/Toliara). Nanasa ny solon-tenan’ny FF ny Filoha Tale Jeneralin’ny Sekoly, Atoa Ramanahirana Gérard nanatrika ny famoahana ny Andiany faharoan’ireo mpianatra ho «Infirmièr, Sage-femme, Anesthésiste). Ny fanirian’ny Tale Jeneraly moa dia ny hitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny «Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana » izay ny atolotry ny FF sy ny fandraisana anjara amin’ny famelabelaran-kevitra maro samihafa hitaizana ny fiainam-panahin’ireo mpianatra.
:Lycée Andoharanofotsy (Novambra 2016)
Fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny taom-pianarana 2016-2017
Ho fanombohana ny taom-pianarana 2016-2017, ny Lycée Andoharanofotsy dia nikarakara fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fisaorana an’Andriamanitra sy ho fangataham-pitahiana ny taom-pianarana 2016-2017. Nasaina nanatrika izany ny Feon’ny Filazantsara (FF) izay nosoloin’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis (Program Manager) sy Rtoa Raveromanana Lalao (Audience Relations) tena, ka nandray anjara fitenenana mahakasika ny Feon’ny Filazantsara sy ireo sehatr’asa sahaniny, indrindra ny amin’ny “Fampianarana Soratra masina Ifandraisana”, “Cours Biblique par Corespondance” . Antenaina fa ho maro ireo mpianatra no ho resy lahatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra, loharanom-pahendrena.
Tanora Taratry ny Filazantsara, TTF “Oniversiten’Antananarivo” (Novambra 2016)
“Mandehana ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra”
Tsy mionona fotsiny amin’ny Fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana”, na ny fandefasana horonan-tsarimihetsika, na ny famakiana ireo boky Literatiora Kristiana ireo mpikambana ao amin’ny TTF eny amin’ny Oniversite Antananarivo, izay mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara “FF”. Tafiditra tao anatin’ny programan’asan’izy ireo ny taona 2016/2017 ny fanaovana Tafika Masina eny amin’ny faritra Ambanivohitra; ka Famangiana tokan-trano sy Tafika Masina an-kalamanjana no notanterahan’izy ireo ny volana Oktobra 2016 lasa teo. Niaraka nanatontosa izany ireo tanora ao amin’ny TTF sy ireo Tanora mpiakambana ao amin’ny “Jeunesse en mission” ary ny solontenan’ny FF nandritry ny roa andro tany amin’ny faritra Andranovelona, 75 KM miala an’Antananarivo. Misaotra an’Andriamanitra fa dia maro ireo olona nandray azy ireo, ary nisy tamin’izy ireo no nisoratra anarana hianatra ny Tenin’Andriamanitra.
Lycée Anjepy sy Fanazava (Oktobra 2016)
Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita fianarana
Noho ny fanombohan’ny taom-pianarana 2016/2017, Rtoa Felana mpiara-miasa an-tsitrapo FF amin’ireo Sekoly ireo dia tena resy lahatra fa tsara raha mametraka ny fianarany eo am-pelan-tànan’Andriamanitra ireo mpianatra. Nanasa ny solon-tenan’ny FF noho izany izy hanolotra ny sertifikan’ ireo mpianatra nahavita ny fianarany tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” atolotry ny FF nandritry ny Fananganan-tsaina. Izany no natao dia nokendrena indrindra koa hanentanana sy hamporisihina ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra satria dia ao amin’ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no ahazoana ny fahendrena. Ao no misy ny fiainana.
“Club Feon’ny Filazantsara Lycée Nanisana/ Rantsana Mpitory an-tsehatra, Sampana STK FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao. (AOGOSITRA 2016)
“Miara-miasa amin’ny Finoana ny mino”
Izany no hevi-dehibe voizin’ny Fiangonana mandritra izao volana Aogositra 2016 izao, no sady volana natokan’ny Fiangonana FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao ho Iraivolan’ny Rantsana Mpitory an-tsehatra; hanaovan’izy ireo hetsika manokana eo anivon’ny Fiangonana. Tsara ny manamarika fa Andriamatoa Mamy Filoha mpitarika io Rantsana io dia anisan’ireo nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara. Koa tamin’izao Iraivolana anjaran’izy ireo izao àry dia nanasa ny “Club FF” avy eo amin’ny Lycée Nanisana izy ireo hanao fitoriana an-kira sy Tantara an-tsehatra tao am-piangonana. Maniry moa ny mpitarika ny Rantsana mba hitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny roa tonta; amin’ny alalan’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika ho an’ireo mpikambana sy ny hanitatra ny Fianarana tenin’Andriamanitra atolotry ny Feon’ny Filazantsara ho an’ny rehetra. Mila miara-miasa amin’ny Finoana tokoa ny mino ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra.
LYCEE ANDOHARANOFOTSY (JOLAY 2016)
Rtoa Isabelle dia mpampianatra eny amin’ny Lycée Andoharanofotsy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo eo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Amin’ny maha anisan’ny mpanabe azy eo anivon’ity Sekolim-panjakana ity dia niezaka hatrany izy nampiely ny Filazantsara teo an-toerana. Tsy tapaka noho izany izy nanentana ireo mpianatra hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), mba tsy hitombo amin’ny fahalalana ihany izy ireo fa hitombo amin’ny fahendrena koa. Nisy ireo resy lahatra koa dia efa nanomboka nianatra. Ho famaranana ny taom-pianarana àry dia nanasa ny solon-tenan’ny FF izy handefa ny horonan-tsary “Ilay olon-tsy fantatra” mba hahafahana mitondra ny hafatry ny Baiboly ho azy ireo alohan’ny hiatrehana ny fanadinana. Mikasika ny “famelan-keloka, ny fahaizana mamela heloka” moa ny hafatra novoizina. Faly ny rehetra tamin’ny fifampizarana satria dia nahafahana nahalala ny sitrapon’Andriamanitra, ny toetra mendrika amin’ny maha Kristiana. Alohan’ny hisarahana dia mbola nampahery sy namporisika ireo mpianatra handroso amin’ny fianarana ny Soratra Masina ireo solon-tenan’ny FF, indrindra ny hametrahana ny fanadinana sy ny hoavin’izy ireo eo am-pelan-tànan’Andriamanitra.
LYCEE NANISANA (JOLAY 2016)
Saika manomboka ny volana Jolay avokoa ireo fanadinam-panjakana ho an’ny Sekoly eto Madagasikara. Ny Zoma 8 Jolay folakandro àry, toy ny fanao isan-taona dia tonga niara-nivavaka tamin’ny mpiara-miasa tao amin’ny Foibe FF Ampandrana ireo mpikambana ao anatin’ny Club FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fiaraha-mivavaka izay natao indrindra ho fiaraha-midera an’Andriamanitra noho ny famaranana ny taom-pianarana 2015/2016 sy ho fitondrana am-bavaka ireo mpianatra hiatrika fanadinana no natao. Nidera an’Andriamanitra an-kira ireo mpikambana satria tsapan’izy ireo fa nitari-dàlana, nanolon-tsaina ary nampahery azy ireo nandritra ny taom-pianarana tokoa ny Fanahy Masina.
:LYCEE NANISANA (MAI 2016)
Ny antony ahavelomako
Araka ny efa voalaza tany aloha dia mivory isaky ny Talata atoandro (12 ora 30mn - 1 ora 30mn) ireo mpikambana ao anatin’ny Cub FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fotoana izay nataon’izy ireo handinihana ny Tenin’Andriamanitra, na hamelabelarana lohahevitra iray izay arahina fiifampizarana sy fifampaherezana eo amin’ny fianarana izay atao. Isaky ny Talata faha telo ao anatin’ny volana dia ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara no mitondra ny Tenin’Andriamanitra na lohahevitra iray hifanakalozana amin’izy ireo. Ho an’ity volana May 2016 ity ary dia niompana tamin’ny Lohahevitra “Ny antony ahavelomako” ny fifanakalozana. Inona no tian’ny Tompo ambara amin’izany? Na dia mbola tanora aza dia mila manana tanjona ny tsirairay eo amin’ny fiainana satria dia mandalo izao fiainana izao sy ny filàny. Ho famaranana ny fivoriana moa dia namporisihina ny rehetra hazoto hamaky ny Baiboly isan’andro. Ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no mampianatra sy manoro ny llàlana tokony haleha.
LYCEE NANISANA (MARTSA 2016)
Fandaharana ho an’ny tanora: Fifaninanana Soratra Masina
Efa mihoatra ny fito taona izao ny fiaraha-miasa mahomby teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana. Amin’ny alalan’ireo “Media” na fitaovam-pifandraisana moa no entin’ny FF mitory ny Filazantsara ho an’ireo mpianatra. Anisan’ireny ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours Biblique par Correspondance” izay hianarany ny Tenin’Andriamanitra, sy ireo bokikely Literatiora Kristiana, ary ny horonan-tsarimihetsika. Araka ny programan’asan’ny ‘Club’ Feon’ny Filazantsara (FF) eo anivon’ny Lycée Nanisana dia misy fifaninanana Soratra Masina isan-taona izay karakarain’ny FF hampitana ny hafatry ny Baiboly ho an’ireo mpianatra, indrindra ireo mpikambana ao amin’ny ‘Club FF’. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia notanterahina ny 16 Martsa 2016 izany. Ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ilay dia makany an-danitra” no nametrahana fanontaniana an-tsoratra. Nahatratra 67 ireo mpianatra nandray anjara ka ireo folo voalohany dia nahazo loka avokoa. Ny fikendrena tamin’izao fifaninana izao moa dia ny hampitana amin’ireo tanora ny hafatry ny Baiboly araka ny voasoratra ao amin’ny Jaona 14:6 “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako”
LYCEE ANJEPY (FEBROARY 2016)
Fanitarana fiaraha-miasa: Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana
Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny Lycéem-panjakana sy ny Lycée Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin'ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée ireo izy. Vokatr’izany, amin'izao fotoana izao dia mahatratra 125 ireo mpianatra manaraka ny FSMI izay atolotry ny FF. Toy ny fanao isan-taona, ny sekoly rehetra dia manomana hetsika manokana entina hanamarihana ny Andron’ny sekoly. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia ny Alarobia Febroary 17, 2016 no nanatanterahana izany. Nanararaotra io hetsika io Felana ka nanasa ny solon-tenan’ny FF mba hanamafy ny fanentanana efa natao tamin’ireo mpianatra ny hianarana ny Tenin’Adriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Tamin’izao andron’ny Sekoly teto amin’ny Kaomina Anjepy izao dia nandefa ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hor: “Ilay Nosy miafina” ho an’ny mpianatra rehetra ny FF. Isaorana Andriamanitra fa marobe ireo mpianatra namaly ny antso ary nandray ny hafatra avy amin'ny Baiboly momba ny tokony hialàna amin’ny fialonana izay mitarika ho amin’ny faharatsiam-panahy.
:LYCEE NANISANA (FEBROARY 2016)
Fomba vaovao no nentina nanentana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra
Tiana hatrany ny mampahatsiahy fa efa ho an-taonany maro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana raha ny lafiny fanabeazana ara-panahy no resahina. Maro noho izany ireo mpianatra mianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Na izany aza, tsy mitsahatra mitady ny fomba handresena lahatra ireo mpianatra mba hazoto hianatra ny tenin’Andriamanitra, ny “staff FF” sy Jemima mpiara-miasa an-tsitrapo eny an-toerana. Tamin’izao taona vaovao 2016 izao àry dia nohatsaraina ny fomba fiasa mba hazahoana vokatra tsara. Nisy ny fihaonana narahina dinika sy fampianarana ary fitondràna ny Tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpikambana ao amin’ny Club FF, mandritra ny fivorian’izy ireo isaky ny Talata atoandro. Fa tamin’izao kosa dia nisy mihintsy ny fitetezana kilasy, nitondrana fanentanana ho an’ireo mpianatra tsirairay teny an-toerana mba hianatra ny tenin’Andriamanitra. Nahafaly fa dia nisy avy hatrany ireo mpianatra resy lahatra ka nisoratra anarana amin’ny FSMI. Manantena fa ho maro koa no hanara-dia azy ireo.
SEKOLY AMBONY ISPPS/ANTANANARIVO-TOLIARA (JANOARY 2016)
Famoahana ireo mpianatra andiany voalohany ao amin’ny Sekoly ambony ISPPS
Anisan’ny mpiara-miasa amin’ny Sekoly Ambony Institut Supérieur des Paramédicaux et Promotion de la Santé (ISPPS) ny Feon’ny Filazantsara (FF) nanomboka ny taona 2014. Eo amin’ny fampandrosoana ny lafiny aram-panahy moa no ifandrombonan’ny roa tonta, ka fiaraha-miasa amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FMSI) na ny Cours Biblique par Correspondance no endrika isehoany. Koa nandritry ny famoahana ireo mpianatra andiany voalohany miisa 121, ny 21 Desambra 2015 tao amin’ny Hotel Le Pavé Antaninarenina dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara ny Tale Jeneralin’ny Sekoly Atoa Ramanahirana Gérad mba hitondra fanentanana momba ny FMSI, nizara trakitra, «brochure» mikasika ireo sehatr’asa sahanin’ny FF, ary nametaka «banderole». Nohararaotina moa io fotoana io, nanentanana ireo mpianatra nahavita ny fianarany sy ireo olona tonga nasaina hirosoany amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra.
:LYCEE NANISANA (Novambra 2015)
Mpianatra manaiky an’i Jesosy ho Mpitarika sy Mpampianatra
Ho an’ny taom-pianarana vaovao 2015/2016, dia tonga nanentana ireo mpianatra eny amin’ny Lycée Nanisana indray ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara mba hianaran’izy ireo ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay efa atao eny an-toerana. Izany moa dia natao nandritra ny fananganan-tsaina ny Alatsinainy 02-11-2015 maraina lasa teo, ka natrehan’ireo mpianatra rehetra, mpampianatra, mpandraraha ary ny Talen-tsekoly. Nanararaotra io fotoana io koa moa Rtoa Jemima “Volontaire” FF izay mpiandraikitra ny Club FF eo anivon’ny Lycée Nanisana, nampahafantatra tamin’ ireo mpianatra ny programan’asan’ny Club izay mivory isaky ny Talata atoandro. Nanentana sy nanasa ireo mpianatra noho izany izy mba hiditra ho mpikambana ao amin’ny Club satria dia zava-dehibe ny manana an’i Jesosy eo amin’ny fianarana izay atao.
:ONIVERSITE ANKATSO (Novambra 2015)
Miezaka hatrany mandresy lahatra ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ny Fikambanana “Tanora Taratry ny Filazantsara” TTF eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo. Nandalo teto amin’ny Foibe FF moa izy ireo nangataka fiaraha-miasa ny hitoriana ny Filazantsara eny an-toerana, amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” na ny Cours Biblique par Correspondance sy ny horonan-tsarimihetsika. Maro tokoa mantsy ireo olana sedrain’ ireo mpianatra mandritra ny taom-pianarana ka misy ireo tsy mahavita ny fianarany hatramin’ny farany. Koa dia mahafaly fa nisy sahady ny vokatra satria nisy ireo mpianatra resy lahatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Tonga teto amin’ny Foibe FF izy ireo naka ny Lesona sy ny Adina. Ho mpianatra hahay hametraka tanteraka ny fianarany sy ny ho aviny eo am-pelantan’i Jesosy tokoa anie izy ireo satria dia miasa foana tokoa ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao azy.
“Mandehana amin’izao herinao izao” Mpitsara 6:14
"Isika tsy maintsy manao ny asan'Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona." (Jaona 9:4)
Collège sy Lycée Privé Amy Fiderana Ankadivoribe (Jolay 2015)
Nofaranana tamin’ny fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika ny taom-pianarana
Ny Feon’ny Filazantsara (FF) dia mitondra ny anjara birikiny mandrakariva eo amin’ny asa Fitoriana ny Filazantsara eo anivon’ny Sekoly. Ho famaranana ny Taom-pianarana 2014-2015 àry dia nanasa ny FF ny Collège Privé Amy sy ny Lycée Privé Amy Fiderana izay mpiara-miasa amin’ny FJKM Ankadivoribe Famonjena ny handefasana horonan-tsarimihetsika. Tontosa soa aman-tsara ny Alarobia 15 Jolay 2015 izany ka horonan-tsarimihetsika miisa telo no nalefa dia: “Ilay Mpiandry ondry kely” ho an’ireo ankizy madinika notronin’ireo ray aman-dreniny; “Ilay olon-tsy fantatra” sy “ Ny isan’andro iainantika dia fanomezana” kosa no nalefa hoan’ny zatovo . Ny fanirian’ny Talen-tsekoly Rtoa Rasoaharivololona sy ny FF moa dia ny hampita ny hafatry ny Baiboly amin’ny alalan’ireo horonan-tsarimihetsika ho an’ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny alohan’ny hisarahana amin’izao fotoam-pialantsasatra izao. Marihina fa efa maro ireo mpianatra ao amin’ity Sekoly ity no manaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF.
:Sekoly ambony tsy miakina ISPPS (Jolay 2015)
Mitohy ny fanentanana eny amin’ny Sekoly ambony
Zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana ny ara-panahy eny anivon’ireny Sekoly Ambony ireny. Tafiditra indrindra amin’ny Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora izay vokarin’ny FF indrindra izany. Koa ny Sekoly ambony tsy miakina ISPPS izay manofana ho mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux) dia efa nifandray tamin’ny FF nanomboka ny taona 2014. Efa nisy noho izany fanentanana ireo mpianatra ao amin’ny Taona voalohany sy faharoa mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na ny “Cours Biblique par Correspondance”. Tonga nanentana fanindroany ireo mpianatra teny an-toerana ny Alakamisy 09 Jolay 2015 lasa teo noho izany ireo solontena avy ao amin’ny FF. Ny fikendrena dia ny hananan’ireo mpianatra zoto hianatra ny Tenin’Andriamanitra, mba ho tanora manana antoka sy fanantenana amin’ny hoaviny miaraka amin’i Jesosy izy ireo.
Groupe FF Lycée Nanisana (Jona 2015)
Fifaninanana Soratra Masina
Araka ny programan’asan’ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) eny amin’ny Lycée Nanisana ho an’ny taom-pianarana 2014-2015 dia nanatanteraka fifaninanana Soratra Masina teny an-toerana ny FF ny 29 Aprily 2015 lasa teo. Niainga tamin’ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohanteny hoe: “Ilay Nosy miafina” moa no nametrahana ny fanontaniana. 29 ireo mpianatra nandray anjara tamin’izany ary taorian’ny fifaninana dia nisy fizarana loka ho an’ireo folo voalohany. Nahazo kitapo misy Logon’ny FF avy izy folo ary notolorana loka fanampiny kosa ireo telo voalohany. Marihina fa ny fikendrena tamin’izao fifaninana izao dia ny hampitana ireo tanora ny hafatry ny Baiboly: “Ny zavatra rehetra ataonao dia ataovy ho an’i Kristy” sy “Ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana, Ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana” Ohabolana 16:18
FF /Medecine Veterinaire (Aprily 2015)
"Mila antsika Andriamanitra":
Izany no hevi-baventy niompanan’ny tenin’Andriamanitra sy ny hira ary ny fifampizarana sy ny fanentanana nandritra ny fitokanam-bavaka niarahan’ireo mpianatra teny amin’ny "Medecine Veterinaire", ny Sabotsy 21 Martsa 2015 lasa teo. Ny solontena avy eto amin’ny Feon’ny Filazantsara, toy ny mahazatra amin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta dia nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fotoam-bavaka izay natao. Nandritra ny fanentanana kosa no nizarana indray ireo fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara sy ny Lesona "Cours Biblique par Correspondance" ho an’ireo mpianatra maniry ny hanaraka izany. Teo koa ny famporisihana azy ireo mba hamaky ireo Bokikely Kristiana vokarin’ny FF sy ny mba hihainoan’izy ireo ny Fandaharana manokana ho an’ny tanora izay alefa amin’ny alalan’ireo Radio mpiara-miasa. Samy maniry ny hitohizan’ny fiaraha-miasa hatrany moa ny an-daniny sy ny an-kilany, satria zava-dehibe amin’ireo mpianatra ny sady manovo fahalalana no manovo fahendrena. "Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy." (Salamo 34:1)
Club Feon’ny Filazantsara, Lycée Nanisana (Martsa 2015)
“Tsy misy olona mahay manompo Tompo roa”
Raha tsiahivina fohy dia anisan’ ny Sekoly mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) nandritry ny taona maro ny Lycée Nanisana. Tao anatin’izany dia nitsangana ny “Club FF” izay ahitana mpikambana eo amin’ny 30 eo ho eo. Koa ankoatry ny fanentanana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na “Cours Biblique par Correspondance”, ny fandefasana horonan-tsarimihetsika dia mivory isaky ny Talata manomboka amin’ny 12 ora 30 mn ka hatramin’ny 1 ora. 10 mn ireo mpikambana. Natao moa izany mba hahafahan’izy ireo mitondra am-bavaka tsy tapaka ny fianarany, mifampizara ny tenin’Andriamanitra sy ireo olana atrehin’ny tanora ka handresena izany. Isaky ny Talata faha telon’ny volana dia manasa solon-tena avy amin’ny FF izy ireo hitondra ny Tenin’Andriamanitra. Koa ho an’ny volana Febroary 2015 teo dia nalaina tao amin’ny Matio 4: 24-34 ny fampianarana. Zava-dehibe ho an’ireo tanora ny hafatra nentina satria dia tandrify tokoa noho ireo fakam-panahy maro mahazo ny tanora dia ny fitsiriritana, ny rendranrendra maro samihafa. Be ny fandrika, fanangolena ataon’ny satana ka mahatonga ny tanora ho andevon’ny vola, ka very ny maha tanora fanasin’ny tany azy. Nandritra io fotoana io moa dia nisy ny fandraisana mpianatra vaovao niditra ho mpikambana ao amin’ny Club.
Lycée Privé Martin Luther Ambohimanambola (Febroary 2015)
Zava-dehibe ny fitaizana ara-panahy ny Mpianatra.
Iaraha-mahalala ny fahasarotan’ny fitaizana sy fanabeazana ny tanora amin’izao fotoana izao. Na dia Sekolim-pinoana aza ny Lycée Privé Martin Luther eny Ambohimanambola dia nanamafy hatrany ny Talen-tsekoly Rtoa Norohanta Louisette fa tena tokony ho voalohan-daharana ny fitaizana ara-panahy ny tanora. Ho tohin’ny fihaonany tamin’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) àry dia nisokatra ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Koa ny Zoma 30 Janoary 2015 nandritry ny fotoam-pivavahana famaranana ny herin’andro tao amin’ny FLM Ambohimanambola dia nanentana sy naporisika ireo mpianatra ny solon-tenan’ny FF hazoto hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra. Araka ny teny filamatry ny sekoly: “Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana” (Ohabolana 4:5) dia adidy lehibe hoan’ny FF tokoa ny mitondra ny anjara birikiny amin’ny famahanana ny fiainam-panahin’ireo tanora miisa 400 eo ho eo beazina ao amin’ny sekoly. Nisy moa Mpampianatra izay notendrena hiandraikitra ny fiaraha-miasa (Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, horonan-tsarimihetsika, sns). Ny mahafaly dia efa nisy 100 ireo mpianatra maniry ny hisoratra anarana amin’ny fianarana. Ho Azy ilay tompon’ny asa irery ihany ny voninahitra.
Departemanta “Médecine Vétérinaire” (Janoary 2015)
Natomboka am-bavaka ny taom-pianarana 2014/2015
Zava-dehibe ho an’ny Fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny Departemanta ny “Médecine Vétérinaire” eny Ambatobe ny fametrahana ny taom-pianarana eo am-pelantanan’Andriamanitra. Koa ny Alakamisy, 15 Janoary 2015 lasa teo, ho fanokafana ny taom-pianarana 2014/2015 dia nisy fiaraha-mivavaka nokarakarain’izy ireo. Ny lohahevitra nofinidiny tamin’izany moa dia mahakasika ny: “Fiaraha-monina amin’Andriamanitra”; Andriamanitra ilay Teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Amin’ny maha mpiara-miasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izy ireo eo amin’ny fampandrosoana ny asa fitoriana eny an-toerana dia nandray anjara tamin’ny fiaraha-mivavaka ny solon-tenan’ny FF: fitarihana ny fotoana sy fanentanana sy famporisihina ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitra. Satria tokoa ny fianarana sy ny fananana ary ny fiainana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra no itarafana ny fonenan’Andriamanitra ao anatintsika.
Ny Sekoly Martin Luther eny Ambohimanambola (Janoary 2015
Manitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Sekoly
Ho an’ny taom-piasan’ny Feon’ny Filazantsara 2014/2015 (Jona 2014-May 2015) dia anisan’ny fikendrena ny fampivelarana ny asa amin’ny Sekoly Loterana sy ny Sekoly tsy miankina. Izany moa dia ny hitondran’ ny FF hatrany ny anjara birikiny amin’ny fanabeazana ireo tanora. Ny faniriana dia hitomboan’izy ireo amin’ny fahendrena koa fa tsy amin’ny fahalalana fotsiny ihany. Nisy noho izany ny fihaonana tamin-dRtoa Norohanta Louisette Talen’ny Sekoly Martin Luther eny Ambohimanambola. Vokatr’izany moa dia hisy fanentanana ireo mpianatra mikasika ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF maimaimpoana ny Zoma 16 Janoary 2015 mandritry ny fotoam-pivavahana famaranana ny herin’andro.
:Ny Club, Lycée Nanisana sy ny fankalazana ny Krismasy 2014
Ny tanora sy ny fakam-panahy
Toy ny fanao isan-taona dia miara-mankalaza ny krismasy ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana (UNESCO, GBU, Feon’ny Filazantsara, Kabary, Dessin ……). Samy naneho ny talentany ho fanamarihana izany ny Club tsirairay avy. Tao ireo nanome ny feony tamin’ny alalan’ny hira, tao ny nanao kabary, tao ny nanao sary, ho an’ny Club Feon’ny Filazantsara dia nanao tantara an-tsehatra izy ireo ho fanehoana fa teraka ny Mpamonjy. Nasongadin’ny Club FF tamin’ny tantara an-tsehatra nasehony àry fa na dia maro aza ny fakam-panahy avelatry satana eo anoloan’ny tanora, raha manana ny Mpamonjy, Ilay Tompon’ny Tompo, Mpanjakan’ny Mpanjaka izy ireo eo amin’ny fiainany dia handresy lalandava. Ho famaranana ny fankalazana dia nisy fiaraha-miala hetaheta niarahan’ny rehetra.
:Sekoly ambony INS.P.N.MAD sy ny Feon’ny Filazantsara. (Aogositra 2014)
Fanentanana ireo mpianatra hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Feon’ny Filazantsara dia mikendry mandrakariva ny hitondra ny anjarabirikiny amin’ny fitaizana ny fiainam- panahin’ireo mpianatra eny anivon’ireo Sekoly Ambony mba hanana tanora vanona aorian’ny fianarany. Koa Sekoly Ambony iray indray INS.P.N.MAD izay mamoaka mpianatra ho “Paramédicaux sy Polytechniciens” no notsidihan’ny Feon’ny Filazantsara ary nanaovana fanentanana mikasika ireo sehatr’asa vokarin”ny LHM dia ny: Cours Biblique par Correspondance, Literatiora kristiana, horonan-tsarimihetsika, fandaharana amin’ny onjam-peo ary “siteweb”. Nankasitraka ny fanoloran-tanana amin’ny fiaraha-miasa ireo mpampianatra satria dia zava-poana ihany ny fampianarana homen’izy ireo raha toa ka tsy ny Fanahy Masina no eken’ireo mpianatra ho mpanazava sy mpanolontsaina azy eo amin’ny fianarana ratoviny. Maniry ny roa tonta mba ho maro ny mpianatra resy lahatra ka hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamaanitra.
ONIVERSITE "PRIVEE" ISPPS (Jolay 2014)
Mivelatra ny fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Sekoly ambony
Araka ny efa voalaza teo aloha dia nanomboka ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantara (FF) sy ny Sekoly tsy miakina ISPPS izay manofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux). Ny Talata 01 Jolay 2014 teo àry dia nanao fanazavàna sy fanentanana mivantana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspopndance) sy ireo boky Literatiora kristiana vokarin’ny FF tamin’ireo mpianatra ao amin’ny Taona voalohany sy Fahatelo eto amin’ny ISPPS Antananarivo ny solontenan’ny Staff FF. Na dia tsy mahazatra ireo mpianatra aza ny fidiran’ny Fampianarana Soratra Masina any an-tSekoly dia maro ireo liana ary maniry ny hiroso amin’izany. Marihina fa ireo Literatiora kristiana dia nomena ho fampitaovana ny bibliothèque ao amin’ny Sekoly mba ahafahan’ny rehetra mandray ny torolalana sy Tenin’Andriamanitra izay manampy amin’ny fiatrehana ny olana eo amin’ny fiainana an-davan’andro. Isaorana an’Atoa RAMANAHIRANA Gérard, Tale Jeneralin’ny Sekoly amin’ny fametrahany ho zava-dehibe ny fampandrosoana ny ara-panahy ao amin’ny Sekoly.
Sekoly “Les 5 Ruches” Tanjombato (Jolay 2014)
Fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika no namaranana ny taom-pianarana.
Raha tsiahivina fohy, dia nanomboka tamin’iny taom-pianarana 2013/2014 iny ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Sekoly “Les Cinqs Ruches”. Izany moa dia vokatry ny hetahetan’ny Sekoly sy Rtoa Pauline mpiandraikitra ny lafiny ara-panahy ao aminy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo rahateo amin’ny FF. Tanjona ny hitomboan’ireo ankizy beazina ho amin’ny fahendrena fa tsy amin’ny fahalalana ihany. Marihina fa nanaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana vokarin’ny FF avokoa ireo mpianatra isaky ny kilasy. Ho famaranana ny taom-pianarana 2013/2014 àry dia nisy fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ilay Nosy miafina” ny Zoma maraina 25 Jolay 2014 lasa teo. Ny hafatra nentina ho an’ireo mpianatra alohan’ny hisarahana moa dia nikasika indrindra ny voka-dratsin’ny fialonana. Ny fialonana mantsy dia vokatry ny fankahalàna sy ny tsy fitiava-namana. Nandray ny hafatra avokoa ireo mpianatra tonga nanatrika teo mba ho entiny miverina any amin’ny fiaraha-monina misy azy avy mandritry ny fialan-tsasatra.
Fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)/ Departement Médecine Véterinaire (Jona 2014)
“Ahoana no fomba hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra”
Mitohy hatrany ny fifanoloran-tanan’ny FF sy ny Département Véterinaire ho an’n asa fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Toy ny fanao ny isan-taona àry dia nanatanteraka ny alim-bavaka ireo mpianatra ny Zoma 13 Jona 2014. Ny lohahevitra nobanjinina nandritra izany dia: “Ahoana no hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra”. Natomboka tamin’ny fotoam-bavaka ny fotoana, narahana hira fiderana, fitsaohana nataon’ireo antokom-pihira sy,tantara tsangana naton’ireo mpianatra eo anivon’ny Département. Akoatr’ireo dia nisy ny famelabelarana ny lohahevitra, fandefasana horonan-tsarimihetsika narahana fifanakalozan-kevitra. Ny Feon’ny Filazantsara moa dia nandray anjara tamin’ny fanentanana ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitr amin’ny alalan’ireo sehatr’asa izay vokariny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance), Literatiora kristiana, Fandaharana amin’ny Radio, ary ny Blog sy Facebook. Ny Feon’ny Filazantsara koa no namaran any fotoana tamin’ny vavaka sy tso-drano. Marihina fa dia nahatratra teo amin’ny 270 teo ho eoi reo mpianatra nanatrika io alim-bavavaka io. “Ary izay ao amin’ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra” (Romana 8: 8)
ONIVERSITE "PRIVEE" ISPPS (Jona 2014)
Tsara ny sady manam-pahalalana no manam-pahendrena avy amin’Andriamanitra
Ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ity taom-piasana 2014-2015 ity, ao anatin’ny programan’asa eo amin’ny sehatry ny Tanora (Youth Program) dia hivelatra amin’ny Sekoly Ambony tsy miankina ISPPS any Toliara sy eto Antananarivo izay manofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux). Nisy ny Fotoam-bavaka Fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny fankalazana ny faha-roa taonan’ny Sekoly izay notanterahina tao amin’ny Fitandremana FLM Toby Fanantenana 67 Ha tamin’ny talata 3 jona 2014 lasa teo. Nisy solon-tena telo avy amin’ny FF nanatrika izany nanentana sy nampahafantatra ireo programan’asa sy literatiora ary sarimihetsika vokarin’ny FF, indrindra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay nahalinana ireo tanora tokoa.
GROUPE FF LYCEE NANISANA (May 2014)
Fiainana ny mianatra ny Tenin’Andriamanitra
Ny “Club FF” eny amin’ny Lycée Nanisana dia manokana fotoana iray isan-kerinandro hiarahana mandinika Soratra Masina sy midera an’Andriamanitra amin’ny hira. Isaky ny Talata fahatelon’ny volana dia misy solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara Foibe mamangy sy mitondra fampianarana eny an-toerana ka ny lohahevitra hoe “Ahoana no anavahana ny tena izy sy ny sandoka?” no nifampizaràna tamin’ny 20 May 2014 lasa teo.
Niverina nitohy ny fiaraha-miasa.(Aprily 2014)
Niverina nitohy ny fiaraha-miasa.
Raha tsiahivina dia anisan’ny programan’asa iray izay iandraiketan’ny Feon’ny Filazantsara ny mikasika ny tanora. Ny Akany Fifampandroana Ambodinisotry dia tafiditra amin’izany ka ny fandefasana sarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra no endriky ny fiaraha-miasa. Nohon’ny fanatsarana sy fanamboarana ny efitrano fampiasa amin’izany moa dia niato nandritry ny volana maro ny fiaraha-miasa. Misaotra an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fahavitan’ny asa koa dia niverina nitohy indray ny fiaraha-miasa nanomboka ny Alatsinainy 24 Martsa lasa teo. Feno hafaliana ireo ankizy sy ireo mpanabe ary ny tompon’andraikitra satria dia afaka nampita ny hafatry ny Soratra Masina tamin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika “Ilay zazalahy kely sy ny elefantany” ho an’ireo ankizy beazina indray. Maniry moa izy ireo ny hitohizan’ny fiaraha-miasa satria tsapa fa dia manampy be dia be tokoa amin’ny fitaizana ireo ankizy ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Marihina fa Tale vaovao no mitantana io Akany io amin’izao fotoana izao.
Anisan’ny mandray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ireo ankizy sahirana tezaina amin’ireny Akany Fanarenana ireny ny FF. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny lafiny ara-panahy, mba hananan’izy ireo toetra mendrika sy araka ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny hoaviny rahatrizay. Amin’ny alalan’ny fandefana Film arahina fifanakalozan-kevitra moa no entina hampitàna azy ireo ny hafatry ny Soratra Masina. Indray mandeha isam-bolana no iarahana amin’ireo ankizy beazina eny amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo. Feno hafaliana hatrany izy ireo ary raha nanontaniana ny antony dia satria mampianatra azy hanana toetra tsara ary koa fotoana iarahan’ny maro miala voly ny toy izao.
Lycée Nanisana nankalaza ny Krismasy 2013
Nifampitantana am-pifaliana ny rehetra fa teraka ho antsika ny Mpamonjy
Niara-nankalaza ny krismasy ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana (UNESCO, GBU, Feon’ny Filazantsara, Kabary, Dessin …) ny 19 Desambra 2013 lasa teo. Tamin'izany dia samy naneho ny talentany avy ireo Club tsirairay . Isan'ireo mpandray anjara mavitrika ihany koa moa ny Club Feon’ny Filazantsara izay nanao hira fideràna ho fanamarihana ny fahaterahan’ny Mpamonjy. Tamin'ny famaranana ny fankalazana dia nisy fiaraha-miala hetaheta niarahan’ny rehetra. Hitondra fanavaozam-pahany ho antsika anie ny fahaterahan'ny Mpamojy.
GROUPE FF LYCEE NANISANA (Novambra 2013)
Iray volan’ny Diakona, nitory tamin’ny alalan’ny hira sy seho an-tsehatra
Anisan’ny programan’asan’ny Club FF Lycée Nanisana ho amin’ny taom-pianarana 2013/2014 ny famangiana Fiangonana mandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady (in-telo ao anatin’ny taona). Ny Fiangonana hatrany moa no manasa azy ireo ary amin'izany dia mandray anjara vavaka, vakiteny, 5 mn'ny SA, hira ary fanentanana mikasika ireo sehatra’asa vokarin’ny FF toy ny FSMI, émission Radio, sns izy ireo miaraka amin’ny Staff FF. Ny Alahady 10 Novambra 2013 lasa teo dia ny FJKM Amboasary Vavahadin’ny Lanitra izay efa misy "Volontaire" FF (Mr Daniel) any an-toerana no niangavy ny handraisan’ny Club anjara. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazàna ny iray volan’ny Diakona izao asa lehibe izao. Tamin’ity indray mandeha ity dia tsy nijanona tamin’ny fandraisan’anjara nandritry ny fotoam-pivavahana maraina ihany izy ireo fa dia nitohy ny tapany hariva ny fotoana: fitoriana an-kira, tantara an-tsehatra mahakasika ny Diakona (andraikitra, toetra, asa fanompoana). Nisy koa tononkalo natolotra manokana hoan’ireo diakona nampitondraina ny lohateny "Ny maha Diakona ahy ve?" Nahatratra 24 ireo mpianatra sy Staff LHM nanatanteraka ny famangiana. Tonga maro ireo kristiana nanatrika ny fotoam-pivavahana na ny tapany maraina na ny tapany hariva. Ny faniriana dia mba ho amin’ny tany tsara no namafazana ka hanome vokatra tsara.
GROUPE FF NANISANA (May 2013)
Miaingà, mandehàna mitety ny tany
Nitohy tamin’iny volana Aprily 2013 iny ny fanasàna ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) avy eny amin’ny Lycée Nanisana ho amin’ny famangiana Fiangonana. Ny Alahady 21 April 2013 lasa teo dia tanteraka soa aman-tsara koa ny asa fitoriana an-kira nataon’ireo mpianatra ao amin’io Club FF io teny amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia. Izao famangiana izao moa dia tafiditra indrindra tamin’ny fankalazàna ny iray volan’ny Sampana Kristiana Tanora (STK) ao an-toerana. Nanana anjara hira 3 izy ireo ary dia nanadratra ny feony tokoa ho fideràna an’Andriamanitra, ary naneho ny Finoany tamin’ny alalan’ny hira “ Mino aho”.
GROUPE FF NANISANA (Martsa 2013)
HIDERA AN’I JEHOVAH LALANDAVA AHO
Anisan’ny Ivontoerana miara-miasa mavitrika amin’ny Feon’ny Filazantsara ny Lycée Nanisana. Ny fikendren’ny roa tonta dia ny hisian’ny fitaizàna mifanindran-dalana eo amin’ny lafiny saina sy vatana ary fanahy eo anivon’ny sekoly. Raha tsiahivina dia efa nanomboka ny taona 2008 ny fiaraha-miasa tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI) na ny Cours Biblique par Correspondance. Nihitatra tamin’ny fandefasana “Film Débat” ary fampitaovana ny biblioteky amin’ny alalan’ireo boky Literatiora Kristiana vokarin’ny FF izany. Marihana fa Atoa Ramavoson Felix mpampianatra ao amin’ny Sekoly izay efa nahavita tanteraka ny FSMI no nanolo-tena an-tsitrapo amin’ny fanentanana sy fandresen-dahatra ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitra. Tao anatin’izay fotoana izay dia niforona ny “Club Feon’ny Filazantsara”. Mpianatra eo amin’ny 20 no mpikambana ao anatin’izany izay tsy mitsahatra ny mitaona ireo mpianatra namany hiroso amin’ny fianarana Soratra Masina no sady mitory an-kira. Atao ahoana tokoa moa no hangina. Na dia mbola tanora aza izy ireo dia tsy nijanonana teo anivon’ny Sekoly fa niezaka nampivelatra ny asa Fitoriana. Mitory an-kira amin’ny alalan’ny famangiana Fiangonana. Ny Alahady 14 Aprily lasa teo àry dia nasain’ny Fiangonana FJKM Merikanjaka Fitahiana io Club FF io. Atoa Felix no nitondra ny fotoana rehetra. Mankalaza ny faha 10 taonany rahateo koa moa ny Sampana Fifohazana. Nampihetsi-po ny Fiangonana ny fahatongavan’ireo tanora sy ny fandresen-dahatr’izy ireo amin’ny asa fanompoana anolorany tena. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
Ny tanjona amin'izao fiaraha-miasa izao dia ny hitoriana ny Filazantsara amin'ny fomba mahomby an'ireo tanora amin'ny alalan'ny:
- Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana
- Fandefasana horonan-tsarimihetsika arahina fifanakalozan-kevitra.
- Fifaninanana Soratra Masina
Misokatra amin'ny Ivontoerana (Sekoly, Akany, Fikambanana, Sampana tanora kristiana eo amin'ny Fiangonana ) ny fiaraha-miasa ao anatin'ny programan'asa mahakasika ny tanora.
- Hanampiana ireo tanora hahay hanohitra sy handresy ny herisatra ara-tsaina ara-batana handresy izay mihatra aminy.
- Hitaizana ny mpianatra hitombo amin'ny fahalalàna sy amin'ny fahendrena.
- Hanampiana ireo mpianatra tsy hirenireny sy tsy ho voatarika amin'ny fakam-panahy (drogue, sex ...)